iDevice | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label iDevice. Show all posts
iOS Device များကို iTool ကို အသုံးပြုပြီး Music / Ringtones / Photo စတာတွေ ထည့်သွင်းခြင်း
iOS Device များကို iTool အသုံး ပြုပြီး Music / Ringtones / Photo စတာတွေ အထုတ် – အသွင်း ပြုလုပ် လိုတဲ့ iOS User များ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ Page မှာ မေးထားတဲ့ အကိုရော မသိသေး သူများ အတွက်ပါ။ ဗပာုသုတ တစ်ခု အဖြစ် လေ့လာ သိရှိစေရန် အတွက်ပါ။
အရင်ဆုံး လိုအပ်တာက iTune နဲ့ iTool software နှစ်ခုပါ။ iTool ကနေ ဖုန်းကို သိရှိ စေရန် iTune software ပါ ရှိရန် လိုအပ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ခု စလုံးကို Computer မှာ ထည့်ထားပါ။
iOS Device တွေ အတွက်က Computer ကနေ ဖုန်းကို သိရှိစေရန် Driver သီးသန့် မလိုပါဘူး။ iTune software လေး install လုပ်ထားရင် အဆင်ပြေ ပါတယ်။
ဒီနှစ်ခု ရှိနေပြီးပြီ ဆိုရင် ဖုန်းကို Computer နဲ့ ချိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါ။
iTune software အလိုလို တက်လာ ပါမယ်။
ခုမှ စတင် အသုံးပြု တာဆိုရင် iTune ကနေ Activate သဘောမျိုး လုပ်ခိုင်း ပါမယ်။
Continue ကိုသာ နှိပ်ပြီး ဆက်သွား လိုက်ပါ။
iTune ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ iphone ဆိုပြီး ဖုန်းပုံလေးနဲ့ ပြပေးနေ ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် iTune ကနေ ဖုန်းကို သိသွား ပါပြီ။
iTune ကို Minimize လုပ်ထား လိုက်ပါ။
iTool software ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
iTool မှာ မိမိရဲ့ဖုန်း model လေးနဲ့ ပေါ်လာ ပါမယ်။
model ရဲ့ အောက်မှာ Music / Photo / Video / iBook စတာတွေ ပေါ်လာပါမယ်။
ကိုယ်ပြုလုပ် ချင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို လုပ်ဆောင် နိုင်ပါပြီ။
Music တွေ ထည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Music ထဲဝင်ပြီး ကိုယ်ထည့် ချင်တဲ့ သီချင်း Folder ကို ဖွင့်ပြီး ဆွဲထည့် လိုက်ရုံ ပါပဲ။ Folder လိုက် ထည့်သွင်း ချင်ရင်လဲ Folder လိုက်သာ ဆွဲထည့် ပေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။
ထိုနည်းတူ ဖုန်းထဲက ရှိနေတဲ့ Music များကို Computer ပေါ် ထုတ်ချင် ရင်လဲ Folder တစ်ခုခု Computer မှာ ပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်ထုတ် ချင်တဲ့ Music များကို Select ပေးပြီး Folder ထဲကို ဆွဲထည့်ပေး လိုက်ပါ။ ထိုနည်း အတိုင်း Photo / Video / iBook စတာတွေကို လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ Contact Backup လုပ်ချင် ရင်တော့ Contact ထဲကို ၀င်ပြီး Import & Export ထဲသွားပါ။
ဖုန်းထဲက contact များကို ထုတ်ချင်ရင် ထုတ်ချင် သလောက်ကို select လုပ်ပြီး Export လုပ်လိုက်ပါ။
ကျတော် နားလည် သလောက် ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသားမှု ညံ့လို့ အဆင်မပြေတာ ရှိရင်တော့ နညးလည် ပေးစေ ချင်ပါတယ်။
▼ Itune Download Link ▼ OR ▼ iTool Download link ▼
Original link - www.patheinit.com
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone
iCloud ကိုကျော်ပြီး Internet သုံးနည်း
iCloud ကျနေတဲ့ အလုံးများ လုပ်လို့ရ ပါသည်။ ပထမ ဦးဆုံး မိမိရဲ့ iDevice ကို ပါဝါဖွင့် လိုက်ပါ။ ပါဝါတက် လာရင် English ကိုရွေး။ ပြီးရင် Select Your County or Region နေရာမှာ Myanmar ကိုရွေးပါ။
ChooseaWi-Fi Network နေရာမှာ မိမိရဲ့ Wifi ချိတ်ပါ။ မချိတ်ခင်မှာ မိမိရဲ့ Wifi ဘေးနားမှာ သော့ ပုံစံလေးရယ် Wifi ပုံစံလေးရယ်ဘဲ ၂ခုဘဲ ရှိနေ ပါလိမ့်မည်။ Home key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ အထဲ ကမှ More Wifi Settings ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ သော့ ပုံစံလေးဘေးနာမှာ Wifi,Wifi ဘေးနားမှာ အ၀ိုင်းလေးနဲ့ အဲဒီ အ၀ိုင်းလေးထဲမှာ i ပုံစံ သင်္ကေတလေး ရှိနေ ပါလိမ့်မည်။
Wifi ကိုအရင် ချိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အ၀ိုင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် DNS နေရမှာ 78.109.17.60 (or) 78.109.17.61ထည့် ပေးပါ။
ပြီးရင် Back key နဲ့ ပြန်ထွက် လိုက်ပါ။
ပြီးရင် wifi ချိတ်သွားပြီ ဆိုရင် Next ကိုနှိပ် လိုက်ပါ။
Activate iPad လို့ပေါ်လာရင် Activation Help ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Hello ပေါ်လာ ပါလိမ့်မည်။ အဲဒီထဲကmenu ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ကဲ အဲဒီထဲ ကနေ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရပါပြီ Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Gmail တွေသုံးလို့ ရပါမယ်။ ပြီးတော့ Youtube,Music တွေလည်း ကြည့်လို့ ရပါမယ်။ ပြီးတော့ GPS လည်း ကြည့်လို့ ရပါမယ်။ ပြီးတော့ သူ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ဂိမ်းတွေလည်း ဆော့လို့ ရပါမယ်။
ကဲ....အဲလောက် ဆိုရင်လည်း မဆိုးဘူးပေါ့ ... :)
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, ဖုန်းနည်းပညာ
IOS User တွေ အတွက် ဖောင့်ဒီဇိုင်း ရှစ်မျိုး
IOS user တွေ အတွက် ဖောင့် ဒီဇိုင်း ပြောင်းသုံး နိုင်ရန် ဖောင့် ဒီဇိုင်း ရှစ်မျိုးကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ ဖောင့် ဒီဇိုင်းကို အောက်က လင့်ကနေ download ရယူ လိုက်ပါ။
Download ရယူနည်း ကတော့ အရင်က အတိုင်း safari ထဲကနေ link ကို add ပြီး install လုပ်ပေး ယုံပါပဲ။
အရင်သုံးထားတဲ့ zawgyi profile ကို setting =>> General =>> profile ထဲ သွားပြီး အရင် ဖျက်ပေး လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို restart လေး အရင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်း တာပေါ့ဗျာ။
ပြီးရင်တော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖောင့်ကို install လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ။
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
နောက်ဆုံးထွက် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား များကို အခမဲ့ ကြည့်ရှု နိုင်မည့် Movie Box ကို Non - Jailbreak iPhone / iPad များတွင် ထည့်သွင်း နိုင်ပြီ
Movie Box ဆိုတဲ့ app လေး ကတော့ အသစ် ထွက် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာကို ကြည့်ရှုနိုင် ၊ Download ရယူ နိုင်တဲ့ iOS app တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က Movie Box app ကို iPhone / iPad တွေမှာ သွင်းမယ် ဆိုရင် ၄င်း iPhone / Pad များကို Jailbreak လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အခုတော့ Movie Box app (Latest Version) ကို Jailbreak လုပ် မထားတဲ့ iPhone / Pad တွေ မှာလည်း ထည့်သွင်း နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်နည်း အသေးစိတ် ကိုတော့ အောက်မှာ တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြ ထားပါတယ်။
အရင်ဆုံး iOS ရဲ့ Setting> General> Date & Time ထဲဝင်ပြီး Set Automatically ကို off ပါ။ ပြီးရင် Date ကို 1 Sep 2014 သို့ ပြောင်းပါ။
ပြီးရင် iOS ရဲ့ Safari Browser ထဲကနေ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ link ကို နှိပ်ပြီး ၀င်ပါ။
▼ vshare.com ▼
အောက်ပုံ ထဲက အတိုင်း ပေါ်လာ ပါမယ်။ Download (Unjailbroken) ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Home Screen ဆီသို့ ပြန်ထွက်ပါ။ VShare app ကို install ပြုလုပ်နေ တာကို တွေ့ရ ပါမယ်။
ပြီးလျှင် VShare app ကို ဖွင့်ပါ။ Trust ကို နှိပ်ပါ။
VShare app ထဲ ရောက် သွား ပြီ ဆိုရင် အပေါ်ဆုံး နားမှာ မှန်ဘီလူးပုံ icon လေး ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို နှိပ်ပါ။
Search Box မှာ Movie Box လို့ ရိုက်ရှာပါ။ အောက်ပုံထဲက အတိုင်း Movie Box app ကို List ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ တွေ့ရ ပါမယ်။ Movie Box app ဘေးက Install ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
Downloading ကဏ္ဍ ထဲမှာ Movie Box app ကို စတင် Download လုပ်နေ ပါပြီ။
Download လုပ်ပြီး သွားရင်တော့ Downloaded ထဲမှာ Download ရယူ ခဲ့တဲ့ Movie Box app ကို တွေ့ရ ပါမယ်။ Install icon လေးကို နှိပ်ပါ။ Install ပြုလုပ် မှာလား မေးရင် Install ကိုပဲ နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Home Screen ကို ပြန်ထွက်ပါ။ Movie Box app ကို တွေ့ရ ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် Movie Box app ကို Jailbreak လုပ် မထားတဲ့ Device တွေမှာ သွင်းတဲ့ အဆင့်ပြီး သွားပါပြီ။ ကဲ.. ဇာတ်ကား ကြည့်ဖို့ အတွက် Movie Box app ကို ဖွင့်ပါ။ အသစ် ထွက် ဇာတ်ကားတွေကို တွေ့ရပါမယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်ကားထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။
မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်ကား ထဲကို ၀င်ပြီးရင် ဇာတ်ကားရဲ့ Resolution အရည် အသွေးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးကြည့် နိုင်တဲ့ function ၊ ဇာတ်ကားကို Download ရယူ နိုင်တဲ့ ခလုတ် ၊ ဇာတ်ကားကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု နိုင်တဲ့ ခလုတ်တွေကို တွေ့ရ ပါမယ်။ ဒီ setting တွေကိုတော့ မိမိ စိတ်ကြိုက် ချိန်လိုက်ပါ။ ဇာတ်ကားကို တိုက်ရိုက် ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ Watch Now ကိုနှိပ်ပါ။
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများကို စတင် ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ။
ဒီ နည်းလမ်း နဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကောင်းများကို အခမဲ့ ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ကြပါစေ။ နောက်ပိုင်း အသစ် အသစ်တွေ တွေ့ရင်လည်း ထပ်မံ တင်ဆက်ပေး နေပါဦးမယ်။
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone, Phone Application
iPhone / Pad တွေကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ဖုို့ အတွက် Tongbu iOS PC Suite (Latest version)
Tongbu ဆော့ဝဲဟာ iPhone / Pad တွေကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက် ပြီး သီချင်းသွင်း ၊ ဆော့ဝဲသွင်း ၊ ဂိမ်းသွင်း ၊ File System နဲ့ ပတ်သက် တာတွေကုို လုပ်ဆောင်ဖုို့ အတွက် သုံးလုို့ ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲ တစ်ခုပါ။
အခု Tongbu ဆော့ဝဲရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် version တွေကုို တင်ပေး လုိုက်ပါတယ်။ Windows OS နဲ့ Mac OSX တွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone / Pad တွေကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ဖုို့ အတွက် Tongbu iOS PC Suite (Latest version) ကုို အောက်က link မှာ ရယူနုိုင် ပါတယ်။
▼ for Windows (v2.3.1) ▼ And ▼ for Mac (v1.1.7) ▼
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, PC-Software, Phone Application
iPhone / Pad တွေကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖုို့ အတွက် iTools v3.1.7.9 (Latest Version) ထွက်ရှိ
iTools ဆော့ဝဲဟာ iPhone / Pad တွေကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သီချင်းသွင်း ၊ ဆော့ဝဲသွင်း ၊ ဂိမ်းသွင်း ၊ File System နဲ့ ပတ်သက် တာတွေကုို လုပ်ဆောင်ဖုို့ အတွက် လူသုံးများတဲ့ ဆော့ဝဲ တစ်ခုပါ။
အခု iTools ဆော့ဝဲရဲ့ နောက်ဆုံး version 3.1.7.9 ကုို တင်ပေး လုိုက်ပါတယ်။ Windows OS ( Windows XP, 7, 8.. ) အတွက်ဖြစ်ပြီး ဆော့ဝဲက English Language နဲ့ပါ။
iPhone / Pad တွေကုို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ဖုို့ အတွက် iTools v3.1.7.9 ကုို အောက်က link တွေမှာ ရယူနုိုင် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, March 28, 20152comments:
Apple ID ကို မိမိ iPhone / iPad ဖြင့် အလွယ် တကူ ဖွင့်နည်း
ကျွန်တော်တို့ iOS user တွေ အနေနဲ့ idevice တစ်ခု ခုကို ပိုင်ဆိုင် လာပြီ ဆိုရင် Apple ID ဆို တာလဲ မရှိ မဖြစ်ပါ။ ဒါကလဲ မခက် ပါဘူး။ မိမိရဲ့Device ပေါ်မှ နေပဲ အလွယ် တကူ ဖွင့်နည်းကို ကျွန်တော် ပြောပြ ပါ့မယ်။ အခါသင့် ရင်လဲ iTunes နဲ့ ဖွင့်နည်းကို ကျွန်တော် တင်ပြ သွားပေး ပါဦးမယ်။
***Apple ID ကို မဖွင့်သေး ခင် Setting >> iTunes & App Store >> Apple ID သို့ ၀င်ရောက်ပြီး Sign out အရင် လုပ်ပေး ထားပါ. .ဒါမှ App Store ထဲ ၀င်ပြီး ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ Box တစ်ခု ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်...***
၁.ပထမ ဦးစွာ App Store ကို ဝင်ပါ။ ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ Free App တစ်ခုကို ဒေါင်း လိုက်ပါ။
၂. ဒီ အခါ ကျရင် Box တစ်ခု ကျလာ ပါလိမ့်မယ်။
၃.Create new Apple ID ကို ရွေးပါ..
၄. ပြီိးရင် Store ကို ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ country ထားပါ (ကျွန်တော် ကတော့ လောလော ဆယ် US store နဲ့ ရှင်းပြ သွားပေး ပါမယ်)
၅. ပြီးလျှင် Next ကို နှိပ်ပါ။ ထပ်ပြီး Agree ကို နှိပ်ပါ။
၆. ဒီနေရာ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Email နဲ့ Password ကို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Password ကိုပေးရင် အရှေ့ဆုံး စာလုံးကို Capital letter နဲ့ ရေးပြီး အနောက် တွင် ဂဏန်း တစ်ခု ခု ပါဝင်ရ ပါမယ်။
၇. Security Answer နဲ့ Question တွေကို အဆင်ပြေ မယ် ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေ စေမယ့် ကိုယ် မှတ်ရ လွယ်မဲ့ ဟာလေး တွေ ပေးစေ ချင်ပါတယ်။ (Password ကိုပြောခြင်း မဟုတ်ပါ) နောက်ပြီး ကိုယ့်မှာ နောက်ထပ် Email တစ်ခု ထပ်ရှိသေး တယ်ဆိုရင်တော့ Rescue Mail ပါထည့် ပေးထား စေချင် ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အကြောင်း တစ်ခု ခုကြောင့် ကိုယ့် Apple ID ရဲ့ Password မေ့သွား ခဲ့ရင် ဒီ နှစ်ခုနဲ့ ပြန်လည် ရယူနိုင် တာကြောင့်ပါ။
အချက် အလက် တွေ ဖြည့်ပြီး ရင်တော့ NEXTကို နှိပ်ပါ။
၈. ဒီ အဆင့်က ကိုယ့်ရဲ့ Billing information နဲ့ ပတ်သက် တာတွေကို ထည့်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပြီး အမှန် တကယ် Bank Card သုံးစွဲသူ ဆိုပါက သေသေ ချာချာ စိစစ်ရန် လိုအပ် ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ Free Account တစ်ခုကို ဖွင့်နည်း ပြပါမယ်။
၉. None ဆိုတဲ့ နေရာကို အမှန်ခြစ် ပေးပါ
အောက် ဆက်သွား ရင် ကိုယ့်ရဲ့ လိပ်စာ တွေကို ထည့်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*** US,CANADA,SINGAPORE လိပ်စာများ ယူရန် ဤ နေရာ ကိုနှိပ်ပါ ***
၁၀. ဒီနေရပ် လိပ်စာ ဖြည့်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်က US Store ရွေး ခဲ့ရင် US လိပ်စာ။ Canada store ဆို Canada လိပ်စာ မှန်ကန်စွာ ထည့်ပေးပါ..
၁၁. ကဲ အခု ဆိုရင် မိမိရဲ့Email ကို တစ်ချက် ဖွင့်ပြီး Apple ID အတွက် Verify လုပ်ပေး လိုက်ပါ။
Verify လုပ်ပြီး ရင်တော့ သင်ဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Apple ID တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင် သွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit : http://www.iosknowledgebank.info
Ref : http://www.winkabarkyaw.net/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 26, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone, ဖုန်းနည်းပညာ